Ka 30, 2018 admin
Kraken Daily Market Report maka 30.05.2018
$180M ahịa gafee ahịa niile taa
Gaa Leta About ngalaba na anyị na blog maka ozi ndị ọzọ banyere Kraken Daily Market Report Ebe a
German na ndị mmanye iwu natara $ 14M si ere jide cryptocurrency
The German ọchịchị nnọọ ka gburugburu $10 nde si na ire Bitcoin na ha jidere na ekperima nnyocha. Ọzọkwa, ha mere ihe ọzọ $4 nde si ere ọzọ cryptocurrencies.
The cryptocurrencies na e resịrị gụnyere 1,312 Bitcoins nke e ukwuu n'ime jide a crackdown na a n'elu ikpo okwu na-akpọ LuL.to, nke iwu na-akwadoghị na-ere nwebiisinka eBooks na audiobooks na nnọọ ala ahịa. The saịtị e jide na-egbochi ikpeazụ June, ya rụọ e jidere na ya akụ wee banye a enweta ego na na a na-eji maka uwe ojii resourcing.
The ire weere ọnọdụ ihe karịrị a di na nwunye nke ọnwa, na usoro nke karịa 1,600 azụmahịa na a German cryptocurrency trading n'elu ikpo okwu.
AIgatha crowdsale ụbọchị e mara ọkwa
AIgatha crowdsale emepe on 5. Jun 2018. Ai Service Platform Dabere na otutu mmadu kwenyere System
AIgatha e na-emepe emepe na-ekesa mgbakọ na keakamere ọgụgụ isi n'ihi na ihe karịrị afọ, ọtụtụ nke na-etinyere na agụmakwụkwọ nnyocha. Ugbu a, ha ikpokọta ya blockchain ike ọzọ dum ọhụrụ technology. Anyị na-e-eme mgbalị iji popularize elu uzu, akwadebe ndị mmadụ na ike nke na-emezu creativities, ime ndụ ndị mmadụ ka mma, na boosting mmepe nke zuru ụwa ọnụ, mmepeanya.
331 Japanese kaadị investors kwuru $ 1M ma ọ bụ karịa na uru na 2017
The National Tax Agency nke Japan kọrọ na 331 nke 549 onye kaadị investors aha enwetala karịa 1 nde dollar na uru site erekwa virtual ego.
The tax otu na-ahụ maka nchoputa kwuru na 2017 kaadị trading eme jikọtara na Bitcoin ịkwụsị uru mbo mbuli Japan si GDP site 0.3%
Kpụrụ Mmepe nke Blockstream ike a supercomputer on blockchain
American Congressman: Mining ga-ha ụtụ isi
Nnọchiteanya nke nke ...
bitcoinngọngọ yinyekaadịcryptocurrencyozin'elu ikpo okwutrading
Previous Post:Gịnị cryptocurrency na-investors gwara ere, na nke onye na-?